ऋण संकलनकर्ताहरू गर्न नपाउने कुराहरू | VTLawHelp.org
यहाँ केही नियमहरू छन् जसलाई ऋण संकलनकर्ता र ऋणदाताहरूले भेरमोन्टमा तपाईंबाट ऋण संकलन गर्ने प्रयास गर्दा पालना गर्नैपर्छ ।
ऋण संकलनकर्ता र ऋणदाताहरूले तिनीहरूले गर्न नसक्ने वा गर्न नहुने त्यस्ता केही कुराहरू गर्न धम्की दिन पाउँदैनन् । उदाहरणको लागि, ऋण संकलनकर्ताहरूले हिंसक हुन वा हिंसक हुने धम्की दिन पाउँदैनन् ।
तिनीहरूले अपराध गर्न वा अपराध गर्ने धम्की दिन पनि पाउँदैनन् ।
ऋणदाताहरूले अदालतको आदेश बिना तपाईंको सम्पत्ति वा तपाईंको ज्याला लिने धम्की दिन पाउँदैनन् ।
ऋण संकलनकर्ता र ऋणदाताहरूले कसैलाई पनि सताउन, उत्पीडित गर्न वा दुर्व्यवहार गर्न सक्दैनन् । ऋण संकलनकर्ता र ऋणदाताहरूले निम्न कार्यहरू गर्न पाउँदैनन्:
तपाईंलाई गालीगलौज गर्न
अनुचित हुनेगरी तपाईंलाई बारम्बार सम्पर्क गर्न
आफू को हो भनेर झुट बोल्न वा गलत ढंगले प्रस्तुत हुन
आफूले तपाईंलाई किन सम्पर्क गरेको हो भनेर झुट बोल्न वा गलत ढंगले प्रस्तुत हुन
तपाईंलाई राती 9बजेदेखि बिहान 8बजेको बीचमा सम्पर्क गर्न
यदि तपाईंले फोन नगर्नु भनेर बताउनुभएको छ भने काममा तपाईंलाई फोन सम्पर्क गर्न
ऋण संकलनकर्ता र ऋणदाताहरूले अरू मानिसहरूलाई तपाईंको ऋणको बारेमा बताउन पाउँदैनन् । तर यदि ऋणदातासँग तपाईं विरूद्धको अदालतको फैसला वा अदालतको आदेश छ भने तिनीहरूले यसको बारे बताउन सक्छन् ।
यहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको एउटा सूची छ जसलाई ऋण संकलनकर्ता र ऋणदाताहरूले तपाईंको ऋणको बारेमा बताउन पाउँदैनन् । केही अवस्थामा भने यी नियमहरू लागू हुँदैन । यी नियमहरू लागू नहुने अवस्थालाई सामान्य नियमहरू सँगै सूचीबद्धगरिएको छ ।
ऋण संकलनकर्ता र ऋणदाताहरूले तपाईंको रोजगारदातालाई तपाईंले ऋण तिर्न बाँकी छ भनेर बताउन पाउँदैनन्...
ऋण संकलनकर्ताले तपाईंलाई कहाँ भेटाउन सकिन्छ भनेर सोध्न मात्र र तपाईंको रोजगारदातालाई तपाईंले उसलाई ऋण तिर्न बाँकी छ भनेर बताउदैन भने उसले तपाईंको रोजगारदातालाई सम्पर्क गर्नसक्छ ...
ऋण संकलनकर्ता र ऋणदाताहरूले तपाईंको परिवारका सदस्यहरूलाई सम्पर्क गर्न पाउँदैनन्...
तर यदि तपाईं विवाहित हुनहुन्छ भने ऋण संकलनकर्ता र ऋणदाताहरूले तपाईंको पति/पत्नीलाई ऋणको बारेमा बताउन सक्छन् ...
...तर यदि तपाईं 18वर्ष मुनिको हुनुहुन्छ र आफ्नो आमाबुबा वा अभिभावकसँग बस्नुहुन्छ भने ऋण संकलनकर्ता र ऋणदाताहरूले तपाईंको आमाबुबा वा अभिभावकलाई ऋणको बारेमा बताउन सक्छन् ...
ऋण संकलनकर्ता र ऋणदाताहरूले अरू कसैलाई तपाईंको ऋणको बारेमा जानकारी दिन वा अन्य कुनै व्यक्तिले सामान्यतया देख्ने गरि संचारको कुनैपनि प्रकारलाई प्रयोग गर्न पाउँदैनन्
उदाहरणको लागि, बिल संकलनकर्ता वा ऋणदाताले आफ्नो व्यवसायिक स्थलमा तपाईंको बाउन्स्ड चेकलाई आफ्नो नगद खाता नजिक टाँस्न पाउँदैनन्
संकलनकर्ता वा ऋणदाताहरूले तपाईंलाई तपाईं ऋणको बारेमा पोस्टकार्ड पनि पठाउन पाउँदैनन्
याद राख्नुहोस्:यदि ऋणदातासँग तपाईंको ऋणको विरूद्धमा अदालतको फैसला वा आदेश छ भने संकलनकर्ता वा ऋणदाताले माथि सूचीबद्धसबै वा धेरैजसो कुराहरू गर्नसक्छ ।
ऋणसंकलनकर्ता र ऋणदाताहरूले ऋण संकलन गर्ने प्रयासमा मानिसहरूलाई जालझेल गर्न पाउँदैनन् । उदाहरणको लागि, ऋणसंकलनकर्ताहरूले ऋणको कानूनी अवस्था बारेमा झुट बोल्न पाउँदैनन्, त्यसैगरी ऋणदाताले आफूसँग तपाईं विरूद्धको अदालतको आदेश वा फैसला छैन भने त्यो छ भनेर भन्न पाउँदैन ।
निजी संकलनकर्ता वा ऋणदाताले आफू राज्य वा संघीय सरकारको कुनै निकायको लागि काम गर्छु भनि दावी गर्न पाउँदैन । निजी संकलनकर्ता वा ऋणदाताले त्यस्तो कुनै कागजी कारवाही गर्न पाउँदैन जसले उसलाई सरकारी निकाय वा कार्यालयसँग वा त्यसको लागि काम गर्दै जस्तै देखियोस् ।
ऋणसंकलनकर्ता र ऋणदाताहरूले ऋण संकलन गर्दा “अनुचित माध्यमहरू” लाई प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । ऋणसंकलनकर्ताहरूले विशेष मुद्दाहरू बाहेक आफ्नो पारिश्रमिकलाई ऋणको रकममा थप्न पाउँदैनन् ।
के कुनै अधिवक्ताले तपाईंको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ ? के तपाईंले संकलनकर्तालाई आफूले तिनीहरूलाई तपाईंको अधिवक्तासँग मात्र सम्वाद गर्न चाहनुहुन्छ भनेर बताउनुभएको छ ? त्यसपछि संकलनकर्ताले तपाईंलाई तपाईंको हिसाब-किताबको विवरण मात्र पठाएर सम्पर्क गर्नसक्छ ।
तपाईंले के गर्न सक्नुहुन्छ
के कुनै ऋणदाता, अधिवक्ता वा संकलन निकायले त्यस्तो कुनै कार्य गरेका छन् जसलाई ऋणसंकलनकर्ता र ऋणदाताहरूले गर्न पाउँदैनन् ?
तपाईंले सबैभन्दा पहिला तिनीहरूलाई तपाईंसँग सबै सम्पर्कहरू रोक्न बताउदै तिनीहरूलाई प्रमाणित पत्र पठाउन पर्छ ।
यदि तिनीहरूले सम्पर्क गर्न जारी राखे वा तपाईंको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्न जारी राखे भने तपाईंले भेरमोन्ट लिगल एडलाई 1-800-889-2047 मा सम्पर्क गर्नुपर्छ ।
यदि तपाईंले राज्यको कुनै निकायलाई जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले निम्न कार्य गर्न सक्नुहुन्छ:
चिट्टेनडेन काउन्टी (Chittenden County) मा एटोर्नी जनरलको कन्स्युमर एसिस्टेन्स प्रोग्राम (Attorney General's Consumer Assistance Program) लाई 1-800-649-2424 वा 802-656-3183 मा फोन सम्पर्क गर्नुहोस्
इमेल पठाउनुहोस् वा
निम्नलाई पत्र लेख्नुहोस्:
तपाईंले भेरमोन्ट एटर्नी जनरललाई अनलाइन उजुरी पनि पेश गर्न सक्नुहुन्छ ।